Brussels nebhasikoro: European capital inopemberera kuchovha uye inokudza yetsika nhaka yayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Brussels nebhasikoro: European capital inopemberera kuchovha uye inokudza yetsika nhaka yayo
Nhau Nhau • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
2019 igore senge hapana rimwe kuBrussels. Gore rino Brussels iri kupemberera makore makumi mashanu ekukunda kwekutanga kweTour de France kweBelgian ngano yebhasikoro Eddy Merckx, pamwe nekuve pekutanga (Grand Départ) ye50 Tour de France. Chiitiko chakasarudzika cheguta guru reEuropean kune vese vanopemberera kuchovha uye kukudza tsika yaro yetsika.
Brussels inodada isingasviki 218km yenzira dzekutenderera. Dunhu reBrussels-Capital rakaona huwandu hwevanofamba mabhasikoro zvakapetwa kaviri mumakore mashanu apfuura. Aya maitiro ekukwira, akacherechedzwa kubvira kutanga kwezana ramakore, akaenderera pamwe neepakati nepakati kuwedzera kwegumi nematatu kubva mugore ra13.
Brussels yachinja pamusoro pemakore, uye yakapa yakawanda uye yakawanda nzvimbo kumabhasikoro. Izvo zvivakwa hazvisati zvakakwana, asi zvinhu zviri kuvandudzika gore rega rega. Kuisa nzira dzekutenderera, kugadzira itsva yekupaka emabhasikoro, kuwedzera iyo 30km / h nzvimbo ... kwave kune zvakawanda zvirongwa, zveveruzhinji uye zvakavanzika, kukurudzira vanhu veBrussels kuti vakwire pamabhasikoro avo.
Iine Bike yeBrussels, Brussels Mobility (dunhu rebasa rinoona nezvekutakura munzvimbo yese yeBrussels-Capital dunhu) inovavarira kuisa vagari veBrussels muchigaro. Kuti uite izvi, sevhisi iri kutsigira akati wandei masangano eBrussels anosimudzira mabhasikoro muguta guru. Mamepu akanaka ekupaka, mazano emigwagwa ekufamba zvakatenderedza guta zvakachengeteka kana kunyange nzvimbo dzakakosha dzekugadzirisa mabhasikoro, aya masangano anotaurirana nemabhasikoro mazuva ese kuti aite bhasikoro muguta rive nyore kwavari.
Brussels Nharaunda yeguta rakasvibira
Brussels ine anopfuura ma8,000 mahekita enzvimbo dzegirini, inoumba inenge hafu yenzvimbo. Kubva paSonia Sango hombe (Forêt de Soignes) kuenda kuBois de la Cambre, nzvimbo zhinji dzakasvibira muBrussels dzinowanikwa nebhasikoro. Kuchengetedza idzi nzvimbo dzakasvibirira uye nekuvandudza yemweya weguta remhando yepamusoro, masimba edunhu eruzhinji Brussels Environment iri kushanda kugadzira nekugadzirisa nzvimbo dzakasvibirira, uye kuchengetedza nzvimbo dzepanyama. Iri kukurudzirawo vagari vemuBrussels kuti vashandise nzira "dzakapfava" dzekutakura, kuguta rakasvibira uye rinoyevedza.
Dunhu Dzenzvimbo Dzemabhiza
Idzi inzira idzo idzo dzinokurudzirwa kwenzendo dzepakati nepakati-refu. Semutemo wechigumwe, vanoshandisa migwagwa yemuno ine mwenje wakareruka, inononoka kufamba uye semhedzisiro haina kunetsekana kupfuura migwagwa mikuru.
Brussels uye iyo Tour de France
Iyo 2019 Grand Départ ichaisazve Brussels neBelgium muchigaro.
Iyo "Great Loop" yaisanganisira Belgium hwese ka47, asi nyaya yakanyatsotanga muguta reEuropean kumashure muna 1947. Iyo Tour yakapfuura neBrussels ka11. Grand Départ yakatanga kuitako panguva yeUniversal Exhibition muna 1958. Kwaive zvakare muBrussels kuti Eddy Merckx akapfeka yake yekutanga yeJersey Jersey, muWoluwe-Saint-Pierre muna 1969, padyo nechitoro chemhuri yake.
Belgium inhoroondo nyika yebhasikoro. Nemitambo yayo mitatu yebhasikoro muFlanders, maviri muArdennes uye angangoita gumi semi semi-Classics, iyo nyika yakati sandara inopa sarudzo yemadzinza evamhanyi emabhasikoro. Pamatanho epasi rese, Belgium inoverengerwa wechipiri mumarudzi emabhasikoro, maererano neInternational Cycling Union (tsime: UCI, 10 Chivabvu 29).
Ndezvese zvikonzero izvi zvinoita kuti Brussels inzwe kudada kukuru uye kufarira iyo Tour de France, iyo yakafadza vateveri vazhinji vemabhasikoro nekuisa vakwikwidzi vavo mukutarisisa.
Mamwe akakosha manhamba
106th kudhindwa kweTour de France
Makore 50 kubvira kukunda kwaEddy Merckx kwekutanga kweTour de France kukunda (1969)
100th yekupemberera yeJena Jersey, yakapfekwa ka111 naEddy Merckx (rekodhi yaachiri kubata nanhasi)
Nhamba yenguva iyo Kushanya kwapfuura kuburikidza neBrussels: 11
Nguva yekupedzisira iyo Grand Départ yakaitika muBrussels: 1958
Nguva yekupedzisira iyo Rwendo rwakapfuura neBrussels: 2010
Grand Départ inosimbisa
CHITATU 3 JULY
Kuvhurwa kwenzvimbo yekutambira kuBrussels Expo, pane iyo Heysel Plateau. Izvi zvichagamuchira vatapi venhau uye varongi veThis France, kubva kuASO (Amaury Sport Organisation).
CHINA 4 JULY FAN PARK
Kubva 4th - 7th Chikunguru, nzvimbo yakasarudzika yeTour de France ichagadzwa muPeace de Brouckère. Anopfuura mazuva mana, kusvika kupera kwechikamu chekupedzisira cheGrand Départ, zviitiko, mitambo nemusangano zvichave zvakarongedzwa neASO neVashanyi vekushanya.
Izvi zviri pachena kuti ndeimwe yeakakurumbira eGreat Départ!
Mapoka evanhu achaungana kuti aone zvikwata makumi maviri nezviviri zvevamhanyi vasere, vanozofadza vateereri kwemavhiki matatu anotevera. Mhando yezviratidzwa ichaitikawo panguva ino. Vakwikwidzi vachasiya iyo Place des Palais voenda nepamusoro peRoyal Galleries yeSaint-Hubert, vachipa vateereri kupota nyika mamwe maonero akasarudzika. Zvikwata zvichaunzwa muGrand-Nzvimbo.
CHISHANU 5 JULY
Belgian shasha yekupedzisira yemutambo weEddy Merckx. Kungofanana nekukunda kwekutanga kwemutambi wedu weTour de France, uyu mutambo wakakurumbira webhodhi wakatumidzwa zita rake uri kupemberera makore makumi mashanu.
Mugovera 6 JULY ROAD STAGE BRUSSELS – CHARLEROI – BRUSSELS> 192KM
Izwi rinokurumidza kumisikidzwa panguva ino yekutanga nhanho ye2019 Tour de France. Pakusiya Molenbeek Saint-Jean uyezve Anderlecht, vatambi vacho vanenge vatofunga nezveMur de Grammont, mugwagwa wakakombama, wakaumbwa makiromita 43, yaive munzira yeEddy Merckx yekutanga Tour de France muna 1969.
Brussels mataundi munzira: Brussels, Molenbeek Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg,
Anderlecht, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem
SVONDO 7 JULY TEAM NGUVA KUEDZA SITESI MUBUSSELS> 28KM
Zvishamiso zvekutanga zve2019 Tour zvinofungidzirwa izvozvi, kutanga neshanduko yemutungamiri… kana sprinter, uyo angangodaro atora manheru apfuura, haasi chikamu chevanyanzvi.
Migwagwa yakafara yeBrussels ichapa zvikwata zvakashongedzerwa zvakanaka mukana wekuratidzira simba razvo, nemakona mashoma uye akateedzana emaflat-emahara kuyedza hunyanzvi hwavo padanho repamusoro remasimba.
Brussels mataundi munzira: Brussels, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem,
Watermael-Boitsfort, Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek
Iwo maBikes muBrussels fund
Mumwe mugari weBrussels anofarira zvebhasikoro achangobva kuseta iyo "Bikes muBrussels" fund (inotungamirwa naMambo Baudouin Foundation). Homwe iyi inovavarira kutsigira mapurojekiti ezvivakwa kana michina iyo inotangwa nemasangano, zviremera kana kudyidzana kwakazvimirira pamwe neruzhinji. Aya mapurojekiti akagadzirirwa kukurudzira vanofamba nemabhasikoro kuti vatenderere guta, nekupindura kune zvinotarisirwa nevashandisi. Mari iyi inoitirwa zvidiki uye zvepakati nepakati mapurojekiti zvakanyanya seaya anoda basa rakakura uye kudyara.
Brussels naEddy Merckx
Eddy Merckx Square: Yakavhurwa musi wa28 Kurume 2019, nzvimbo iyi iri muWoluwé-Saint-Pierre inopa mutero kune aimbove mukwikwidzi webhasikoro. Akakura uye aigara mudunhu kwemakore makumi maviri nemanomwe nevabereki vake, vaive nechitoro ipapo. Yakanga iri zvakare uko Eddy Merckx akawana yake yekutanga yero juzi, panguva yeTour de France nhanho muna 27.
Iyo Grand-Nzvimbo muBrussels: Muna Chikunguru 1969, Eddy Merckx akafara nezviuru pabhandi paHôtel de Ville, nekuda kwekuita kwake kwakanaka muTour de France. Mutyairi webhasikoro akapfeka yero yake yekutanga yero kujuzi kuParis.
Laeken: Eddy Merckx akakwikwidza mumujaho wake wekutanga muLaeken musi wa16 Chikunguru 1961, achipedza ari pachinhanho chechitanhatu. Iwo makumi maviri neshanu edhisheni yeGrand Prix Eddy Merckx yakaitikawo muLaeken, pakati pa25 na1980. Mujaho wenguva yekutongwa wakatanga nevatasvi vemabhasikoro vachimhanya vega, kozoti vari muzvikwata zviviri. Yakafukidza chinhambwe che2004km.
Sango: Achiri mutambi, Eddy akakunda iyo Forest Omnium muna 1964 naPatrick Sercu.
Eddy Merckx metro chiteshi muAnderlecht: Bhasikoro iro "Cannibal" rakashandiswa panguva yeHour Record yake muna 1972 riri kuratidzwa pachikuva chikuru chechiteshi ichi chemetro, chakavhurwa muna 2003.
Eddy Merckx Chikoro: Iri muWoluwe-Saint-Pierre, chikoro chesekondari ichi chakapihwa zita zvakare mukuremekedza mujaho muna 1986.
Royal Sporting Club Anderlecht: Anofarira nhabvu, Eddy Merckx akazove fan hombe yeAnderlecht nhabvu nhabvu kuburikidza neshamwari yake huru, aimbova muBelgian nhabvu uye wepasi rose maneja Paul Van Himst.
La Belle Maraîchère: Iyi resitorendi yezvokudya zvegungwa iri mukati meguta guru ndiyo yaimbova racer inofarira. Iye achiri kuendako nguva nenguva naPaul Van Himst kuti vanakirwe, pakati pezvimwe zvinhu, zvinonaka Prawn Croquettes.
#tourensemble: Chikwata che23 cheGreat Départ ye2019 Tour de France
Ehezve, zvinokwezva zvikuru zveTour de France zvichave vekunze nyanzvi dzemabhasikoro, vanove nyeredzi dzeGreat Loop. Asi zvakadiniko nezvezuva nezuva mabhasikoro? Iyo #tourensemble chirongwa chine tarisiro yekuwana vagari vazhinji veBrussels sezvinobvira muchigaro chechigaro uye shure kweGrand Départ. Kunyangwe vachitenderera nguva nenguva, sevaperekedzi, nekuda kwemafaro kana kunyangwe vachizeza kuguta, #tourensemble iri kuunza vese pamwe chete kune imwecheteyo yakagovaniswa chinangwa: kugona kutenderera kutenderera guta redu, zvimwe, zvakare kana nguva dzose!
#tourensemble inobatanidza vese maBelgian nenyika dzese dzinopa guta hupfumi hwetsika, kutenderera chirongwa chekubatana chinopa chirevo kuTour de France neGreat Départ. Inozova pekutanga pe "chirongwa chehupenyu hwevagari", uko bhasikoro rinova iro rinonyanya kutakura muguta.
Chinangwa chemushandirapamwe wedunhu ndechekuwedzera zvakanyanya huwandu hwevanofamba nemabhasikoro muBrussels mukumhanyira kuTour de France, uye kuve nemabhasikoro akawanda kupfuura mota muguta guru revhiki reGrand Départ. Iyo chaiyo yekudyidzana danho, wese munhu anokokwa kujoina timu!
Gore rino kunyanya, Brussels yanga ichishanda zvakanyanya. Kubva pakuratidzira kusvika pakuvakwa kwevelodrome, kuburikidza nekutenderera kwakatungamirwa nemitambo yekutanga, zviitiko zvakawanda zviri kurongedzwa munzvimbo dzakasiyana muguta guru kubhadhara mutero kune vanofamba nemabhasikoro uye shasha yedu yakakurumbira.
Jef Geys Exhibition
Muimbi weBelgian Jef Geys (1934-2018) akatora mifananidzo yekutanga yeTour de France, iyo Eddy Merckx akahwina mu1969, kuti "azvinyike zvizere munyika yebhasikoro". Kure nekushamisira mujaho uyu mukukunda, kufukidza kwake kwakapesana kunotarisa mukusanganiswa kweiyo idiosyncrasies uye hupenyu hwezuva nezuva hwenyika yebhasikoro. Pakati pevaoni, kumhanya mabhasikoro, mota dzechikwata nemabhodhi emabhodhi, nguva nenguva mujaho anogona kuoneka, anogona kuve Eddy Merckx zviri nyore… Mapeji maviri eBelgium mapepanhau kubva panguva iyoyo yenguva akaisa mifananidzo iyi. Zuva rakakunda Eddy Merckx Mutambo, Neil Armstrong akatora nhanho dzake dzekutanga pamwedzi. Kubudikidza nechiratidziro ichi, Jef Geys anozviratidza zvakare kuve tenzi wehukama pakati peHighs neLows (sezvazviri, apa) izvo zvakamuita mumwe wevane mukurumbira post-war yeBelgian artists.
Mazuva: Kusvikira 1 Gunyana 2019
Makore zana eiyo Yellow Jersey Exhibition
Kune ino 106th edition yeTour de France, chiratidziro ichi chipa mutero kune 15,059 3,228 vaichovha mabhasikoro avo vatanga iyo Tour, uye kune avo 54 111 vakwikwidzi. XNUMX Vatyairi vemabhasikoro veBelgian vakapfeka zvinodadisa iyo yeJersey Jersey, anonyanya kuzivikanwa ari Eddy Merckx, isinga pikiswe tenzi wemavhiri maviri, akaipfekedza kaXNUMX panguva yebasa rake. Chinyorwa!
Nzvimbo: Espace Wallonie
Mazuva: Kusvika 14 Chikunguru 2019
Iyo Yekushanya Kuratidzira
Chiratidziro ichi chinoteedzera nhoroondo nekusimudzira kweyechitatu mutambo mukuru wepasirose wepasi rose, kuburikidza nemisoro yakasiyana: nhoroondo, kugadzirwa kwenzira nematambudziko ayo, zuva padanho, mota yekuzivisa, mashiripiti emitambo mhenyu, Mutambo weKushanya nevatsigiri vayo, iyo 105th Tour de France nzira uye manhamba, nezvimwe.
Inowanikwa muMolenbeek Saint-Jean, mumwe wematare gumi nematanhatu mudunhu reBrussels-Capital, chiratidziro chinoitika muRaymond Goethals Stand kuEdmond Machtens Stadium. Uku kukanda kwedombo kubva chaiko kwekubva panhanho yekutanga yeTour de France, uye yekare Karreveld velodrome.
Nzvimbo: Edmond Machtens Stadium
Mazuva: Kusvikira 14 Chikunguru 2019 Rumwe ruzivo:
VELOMUSEUM chirongwa cheArchive uye Museum yeFlemish inogara muBrussels (AMVB), yakabatana nehupfumi hwevanhu bhizinesi Cyclo neDutch library Muntpunt. Zvinokutora iwe parwendo rwemahara kuburikidza nemakumi mashanu emakore etsika yemabhasikoro muBrussels. Iwo zana nemakumi mashanu emakore, nekuti muna 150 mirau yekutanga yebhasikoro yakaunzwa muguta reBrussels.
Mazuva: Kusvika 7 Chikunguru 2019
Tsvaga Brussels nebhasikoro
Eddy Merckx neBrussels nebhasikoro
Rwendo urwu runopemberera mumwe wevanonyanya kuziva mabhasikoro epasirese, Eddy Merckx, mukwikwidzi wenguva shanu weTour iyo France. Kubva paudiki hwake muWoluwe-Saint-Pierre kusvika mukukunda kwake kwakawanda, awanezve zvese paanenge achifamba mutsoka dze "Cannibal". Kubatanidza Tour anecdotes nenhoroondo uye kusimudzira kwekuchovha bhasikoro muBrussels, rwendo urwu rwunoisa bhasikoro munzvimbo yekuremekedzwa muBelgian capital.
Brussels nhanho ye2019 Tour de France nebhasikoro remagetsi
2019: Brussels inogamuchira Grand Départ yeiyo Tour de France! Nguva yekupedzisira yaive muna 1958. Svondo 7 Chikunguru ichaona kuyedzwa kwechikwata nguva. Ivo varongi vakagadzira 28km chiuno muguta redu guru, vachifamba munzira dzakanyanyisa uye kuyambuka mapaki akanaka kwazvo. "Kamwe muBrussels" haigone kupotsa pane izvi. Isu tinokurudzira kuti iwe upfeke yero yero yunifomu uye uve shasha yemagetsi bhasikoro nesu. Pane edu e-mabhasikoro, isu tinoteedzera iyo nzira yakatorwa nevanojaira uye nekuwana Brussels panguva dzakati dzetsika. Kana iwe wagara wakarota nezve kutora chikamu muGreat Loop, uku kukwira ndekwewe!
Sangano: Kamwe muBrussels
Tsvaga Brussels nebhasikoro Chishanu chega chega neMugovera neCactus.
Iyo Yevhiki Yekushanya inotora madiki madiki kubva munzira yakarohwa kuti vawane nzvimbo dzinoshamisa nenzvimbo dzeBrussels.
Greeters vanhu vemuno vanopa vashanyi ruzivo rwechienzi, rwekutanga uye rwega kuguta kana nharaunda, nenzira ine hushamwari uye inogamuchirwa. Pfungwa iyi muenzaniso wakakwana wemafambiro mune kumwe kushanya kwekushanya, kuri kuwedzera kudiwa kubva kuvashanyi vari kutsvaga ruzivo rwechokwadi. Vamwe vacho vanopa kutasva mabhiza izvo zvinokutora iwe kunzvimbo dzavanofarira.
Iwe unogona kunge usingazive, asi iyo Brussels-Capital dunhu rakashongedzwa nekoroni yakapfuma iyo misoro mishoma inogona kukwikwidza. Kuratidzira izvi, uye saka wese mugari weBrussels anogona kutora mukana nazvo, iyo Green Promenade yakagadzirwa. Iyo nzira inopa 63km chiuno chakakomberedza Brussels: rwendo rwakanakisa rwunobvumidza avo vese vari vaviri netsoka uye bhasikoro kuti vawane akawanda mapaki, nzvimbo dzepanyama uye nzvimbo dzakachengetedzwa munzvimbo yedu inoyevedza. Iyo Green Promenade yakakamurwa kuita zvikamu zvinomwe zvinomiririra akasiyana mamiriro enzvimbo dzeBrussels. Kufukidza pakati pe5 ne12km, zvikamu zvayo zvinopinda munzvimbo dzakasiyana siyana, vangave vari mumadhorobha, kumaruwa, kana maindasitiri, vachiratidza nzvimbo zhinji dzeBrussels munzira dzakasvibira munzira.
Nhungamiro yekutsvaga Brussels nebhasikoro
"Brussels nebhasikoro" trail mepu
Iyi mepu yemepu inoratidza nzira nhatu dzine themed dzemabhasikoro ematanho ese. Panguva yako wega, tsvaga Brussels uye yayo ambiance, tsika uye kupfuma kwayo nhaka.
Mepu yebhasikoro yeBrussels
Mepu iyi inoratidza gradients, nzira dzekutenderera (nemadirections), nzira dzekutenderera, nzvimbo dzinogona kumiswa mabhasikoro, "Villo!" zviteshi pamwe nenzira dzesango, uye inopa akawanda matipi
Usquare uye yayo nyowani velodrome
Usquare iko kushandurwa kwenzvimbo yechiuto kubva kutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri kuita nzvimbo inovhurika yakavhurika yakatarisana nezana ramakore rechi20. Haisi kambasi, asi chidimbu cheguta nyowani nezvose izvi zvinoreva: nharaunda yeBrussels yeramangwana yakasanganiswa uye ine simba, yemaguta uye ine hushamwari, yunivhesiti-yakanangana uye yepasi rose, inoenderera uye ine hunyanzvi.
Kubva pavhiki ino Usquare ichave neakavhurika-velodrome: nzvimbo isingakanganisike apo vafambi vemabhasikiti vanogona kuita zvido zvavo.